Riifarandamii uummata Qimaanti - BBC News Afaan Oromoo
Kenninsa sagalee riifarandamii uummata Qimaanti
Aanaalee afur Naannoo Amaaraa Godina Gondar Kaabaa bakka ummattoonni Amaaraa fi kan Qimaant waliin keessa jiraatu jedhaman gandoota saddeet keessatti kaleessa guyyaa guutuu sirni riifarandamii sagalee kennuu taasifamaa oleera.
Haaluma riifarandamichaatinis, jiraattoonni gandoota kanneen bulchiinsa ofiin of bulchuu Qimaanti jala galuu yookan ammoo bulchiinsuma kana dura tureen itti fufuuf murtee dabarfatu.
Walitti bu'iinsa A.L.I. bara 2008 gaaffii eenyummaa fi ofiin ofi bulchuu uummata Qimaantiin haala walqabateen naannichatti uumameen, nagaa eegdota dabalatee namoonni 95 lubbuu isaanii akka dhaban gabaasni Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatiin dhiyaate mul'iseera.
Gaaffii eenyummaa fi ofiin of bulchuu walfakkaataa naannoolee biyyattii garaa garaa keessatti waggoota shanan darbaniif ka'aan keessaa, Mootummaan Amaaraa kan uummata Qimaanti haala addaatti ilaaluun yaa'ii baatii Bitooteessa bara 2007 taasiseen beekamtii kenneefii jira.
Gaaffii eenyummaa fi ofiin ofi bulchuu kana naannoo Uummattoota Kibbaatti, uummanni Koonsoo fi Quccaa akkasumas Naannoo Amaaraatti jiraattoonni Walqaayit kaasuun isaanii ni yaadatama.
Haaluma kanaanis Godina Gondar Kaabaatti kan dhalattoonni Qimaanti baayyinaan keessa jiraatu jadhaman gandoonni 63 akka Bulchiinsa Qimaanti jala galan yoo taasifaman, gandoonni 12 bakka uummattooni Amaraa fi Qimaanti wal makuun keessa jiraatan ammoo filannoo isaanii riifarandamiidhaan akka beeksisaniif murtaa'eera.
Riifarandamii Qimaanti bufataalee filannoo 34 keessatti gaggeefamu irratti jiraattooni kuma 25 ta'an sagalee isaanii kennu jedhamuun yaadame. Garuu jiraattoonni gandoota saddeetii galmaa'uun kaardii fudhatan kuma 21 oli ta'usaanii Ejensiin Qunnamtii Uummataa naannichaa beeksise.
Lakkoofsi buufataalee filannoos kan duraan yaadamee gadi dha.
Gaazeexxeessaan naannichatti Aanaa Cilgaa Ganda Nagaadee Baahir keessa adeemsicha hordofaa ture, bufataalee filannoo tokko tokkotti adeemsichi barfatee eegaluun alatti, rakkinni cimaa akka hin mul'atiin BBCtti himee jira.
Akkasumas maanguddoon inni dubbise tokko, jiraattoonni naannichaa hedduun waggoota dheeraaf waliin jiraachaa kan turan ta'usaanii dubbachuun, riifarandamichi wal jibbiinsa akka hin uumne jechuun sodaa qaban itti himulleen dabalee dubbateera.
Kana malees umuriin filattootaa baayyee kan hin geenye kan fakkaataniifi gaafatamnaanis hundumtu waggaa '18' jechuun itti himusaanii illeen himeera.
Bu'aan riifarandamichaas lakkaa'amuun har'a Fuulbaana 8 ganama irraa eegaluun bufataalee filannootti akka maxxanfamu ni eegama.
Akka sagantaa boordii filannoo qaama adeemsicha olaantummaan gaggeessu mul'isutti, bu'aan sagalee Fuulbaana 15 Mana Maree Federeshiniitti ergama.